आज शनिबार,शनीदेवलाई यसरी खुशी पार्नुहोस्,सबै रोकिएका काम बन्नेछ्न् ! – Namaste Dainik
May 16, 2020 NamastedainikLeaveaComment on आज शनिबार,शनीदेवलाई यसरी खुशी पार्नुहोस्,सबै रोकिएका काम बन्नेछ्न् !
के साच्चै सम्पति प्राप्त हुन्छ ? शनिदेवको पुजाले साच्चै नै सम्पतिको प्राप्ति हुन्छ त्यो पनि एकदम छोटो समयमा । हामिले शनिको विभिन्न दोषहरुको बारेमा त जानेका छौ होला तर शनिदेवको यदि कृपा भयो भने तपाईको जीवन अपत्यारिलो पारा ले सम्पन्न हुनछ।